[Review] Top 5 lược điện tốt nhất và được ưa chuộng hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 lược điện tốt nhất và được ưa chuộng hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ikama likagesi inomklamo oyingqayizivele okhethwa abesifazane abaningi ukukhetha ukuwusebenzisa namuhla. Lo mkhiqizo usekela ukwenza izinwele zezinwele ekhaya ngokushesha, ngokuthanda kwakho njengokugoqa, ukuqondisa, izinwele ezigoqene, njll. Nokho, emakethe, kunezinhlobo eziningi zalezi zikama ezinemiklamo, izitayela kanye nemikhiqizo. Ngakho hlanganyela nathi ukuze uthole Buyekeza amakamu kagesi aphezulu angu-5 ahamba phambili nadumile namuhla ngesihloko esingezansi.
1 Liyini ikama likagesi?
2 Ukubuyekezwa kwekamu likagesi kuhle?
2.1 1. Mayelana nezinzuzo zekamu likagesi
2.2 2. Mayelana nokungalungile kwama-combs kagesi
3 Indlela yokukhetha ikamu likagesi elisezingeni eliphezulu
4 Amakamu kagesi aphezulu angu-5 ahamba phambili nadumile namuhla
4.1 4.1 Ikamu lezinwele zikagesi le-K-SKIN KD380 elinemisebenzi eminingi
4.2 4.2 K SKIN KD380K umsebenzi wokuqondisa izinwele omningi kanye ne-curler
4.3 4.3 Ikama likagesi elisezingeni eliphezulu leNova NHC-8810
4.4 4.4 Smart Panasonic EH-HE10VP421 Electric Comb
4.5 4.5 Ikhwalithi ye-Braun BR 730 yokukama izinwele zikagesi
Liyini ikama likagesi?
Ikama likagesi umkhiqizo owenza kube lula ukwenza izinwele ngesitayela esifanayo nesitayela njengekama elivamile. Ngesikhathi esifanayo, leli khekhe lingakha izinwele zezinwele eziningi ezihlukene ngokuthanda kwakho, njenge-curly, i-ruffled, iqondiswe, i-wavy, … ngokushesha futhi kalula.
Ngokomthetho wokusebenza, le nhlanganisela kagesi inomthombo kagesi, lapho isebenza, izokhipha ukushisa. Ukusuka lapho, idivayisi iyakwazi ukuqondisa ngokushesha izinwele futhi idale izinwele zezinwele ezinhle ngemizuzu engu-15-20 nje. Ngesikhathi esifanayo, le nhlanganisela isebenza kahle, ayenzi imisindo ecasulayo ngesikhathi sokusetshenziswa.
Ukubuyekezwa kwekamu likagesi kuhle?
Ingabe ikama likagesi lilungile?? Lona umbuzo abesifazane abaningi abakhathalelayo futhi abazibuzayo muva nje. Ukuze siphendule lo mbuzo, ake sihlole ubuhle nobubi bekama likagesi elilandelayo:
1. Mayelana nezinzuzo zekamu likagesi
Ikamu lephoyinti liwumshini wokwenza izinwele osetshenziswa kakhulu abantu abaningi namuhla. Ngokukhethekile, leli kama likagesi linezinzuzo ezilandelayo ezivelele:
Umkhiqizo usekela ukudala izinwele zezinwele ezilula kakhulu ngemigqa yokuhlukanisa esheshayo nelula, i-zigzag noma ingxenye ephakathi.
Ngokungafani nama-combs ajwayelekile, ama-combs kagesi angasetshenziswa kalula kuzo zonke izinhlobo zezinwele ezahlukene futhi enze izinwele zibe bushelelezi.
Lelikama lingasetshenziswa lihlangene namafutha abalulekile afakwa ezinweleni ukuze anakekele futhi avikele izinwele zansuku zonke ziqine futhi ziphumelele.
Ngenxa yokuthi isetshenziswa ugesi, kungenzeka ukuhlanganisa ikama likagesi nesomiso ukuze udale izinwele ezibushelelezi, ezicwebezelayo ezinezitayela eziningi zokuqondisa nokugoqa okungahleliwe ngokushesha emaminithini angaba ngu-20.
Imikhiqizo ivamise ukwenziwa ngezinto zekhwalithi ephezulu futhi isebenzisa ubuchwepheshe besimanje obuthuthukile ukuze kuqinisekiswe ukuqina okuphezulu nokuphepha okuphelele lapho isetshenziswa.
2. Mayelana nokungalungile kwama-combs kagesi
Noma yimuphi umkhiqizo unezinhlangothi ezi-2, ngakho-ke ikama likagesi lisenobubi obuthile okufanele bubalulwe ngale ndlela:
Umkhiqizo ungasetshenziswa kuphela nomthombo wamandla angaguquki, ngakho-ke uma usetshenziswa ngokungalungile, ungabangela umlilo noma ukushaqeka kukagesi noma ube yingozi uma usetshenziswa.
Idizayini yekama kagesi enezintambo kwesinye isikhathi idala ukuthandelana kubasebenzisi ngesikhathi sokusetshenziswa.
Lo mkhiqizo udinga ukuthi uvale amandla ngemva kokusetshenziswa futhi uvumele umshini uphole ngaphambi kokuhlehlisa futhi uwugcine ngaphandle kwalokho kulula ukubangela umonakalo ongadingeki.
>>>Funda kabanzi: I-TOP 8 Hair Curlers, Good Hair Straighteners (Panasonic, Philip, Shinon, Koria)
Indlela yokukhetha ikamu likagesi elisezingeni eliphezulu
Ukuze ukhethe umkhiqizo Ikama likagesi elisezingeni elihle futhi uhlangabezane nezidingo zokusetshenziswa, kufanele udlule kulezi zinketho ezilandelayo:
Hlola impahla yekama kagesi
Lona umbandela obalulekile futhi akufanele uzitshwe uma ukhetha ukuzithengela ikama likagesi. Kufanele ubeke phambili ukukhetha ikamu elinesibambo sepulasitiki ukuze uqinisekise ukuphepha futhi ukhawulele ukusha kwezandla ngenxa yokushisa ngokweqile. Ngakolunye uhlangothi, ukwakheka kwensimbi nakho kuyisinqumo esihle, kodwa ukwahlukanisa kwekama kufanele kubhekwe. Ngesikhathi esifanayo, qiniseka ukuthi isibambo asishisi uma sisetshenziswe isikhathi eside futhi ugweme ukushisa izandla zakho.
Cabanga ngokushisa kwekama
Uma kucatshangelwa umbuso wokushisa nakho kuyinkomba esemqoka lapho ukhetha ukuthenga ikama elifanele likagesi. Kufanele ubeke phambili ukukhetha ikamu elinamazinga okushisa ahlukene. Ngalokho, kuyenzeka ukulungisa ngokuguquguqukayo izinga lokushisa elifanele ukuze kuhlangatshezwane nazo zonke izidingo zokusetshenziswa. Ngesikhathi esifanayo, kufanele futhi ukhethe ikamu likagesi elinemodi yokuvala amandla okuzenzakalelayo lapho lishise ngokweqile noma lingasebenzi ukuze uqinisekise ukuphepha nokwandisa ukonga amandla.
Bheka izinsiza ezifakiwe zekamu
Njengamanje, ikamu lamaphuzu lihlanganiswe nezinsiza eziningi ezihambisanayo ukuze kube lula ukuthi bonke abasebenzisi basebenzise. Kufanele ukhethe amakamu afakwe izinsiza ezengeziwe ezifana namalambu amafutha, imodi yokukhiqiza i-ion, idizayini yeshubhu yerola yokugoqa izinwele, njll. Ngakho-ke, khetha ngokusekelwe ezidingweni zakho umkhiqizo oza nento ewusizo kakhulu kuwe.
>>> Bona okuningi: [Review] Izomisa izinwele ezi-6 eziphezulu ezinhle nezithengiswa kakhulu namuhla
Amakamu kagesi aphezulu angu-5 ahamba phambili nadumile namuhla
Kunemigqa eminingi emakethe namuhla ikamu likagesi ngamamodeli ahlukene, imiklamo kanye nezici. Ngakho ake sibhekisele Buyekeza izichazamazwi ezi-5 ezihamba phambili nezidumile namuhla Okulandelayo:
4.1 Ikamu lezinwele zikagesi le-K-SKIN KD380 elinemisebenzi eminingi
I-K-SKIN KD380 uchungechunge ikama izinwele zikagesi Ibhrendi ye-K-SKIN enemisebenzi eminingi idumile namuhla. Lo mkhiqizo unomklamo ohlangene kanye nemibala eyahlukene abasebenzisi abangayikhetha ngokukhululekile ngokuvumelana nezintandokazi zabo kanye nezifiso zabo. Lelikama linepuleti lokushisisa le-ceramic elishisisa ngokushesha kumasekhondi angu-30 futhi lizinzise ngokuzenzakalelayo izinga lokushisa lezinwele eziqondile emizuzwini emi-3 nje.
Ngaphezu kwalokho, ikamu lezinwele zikagesi le-K-SKIN KD380 linomklamo wezinyo lekama lokunciphisa ukungqubuzana, ungqimba lokuvikela ekushiseni kanye nokufakwa kwezokuphepha kwezingqimba ezi-2. Ngaleyo ndlela kusiza abasebenzisi ukuphatha kalula, izinwele zesitayela ngaphandle kokukhathazeka ngokusha kwezandla nokulimala kwesikhumba. Lo mkhiqizo ufakwe amazinga okushisa angu-5 alungisekayo ukusuka ku-150 – 200 degrees Celsius kuye ngohlobo lwezinwele ezinempilo noma ezibuthakathaka. Ngesikhathi esifanayo, izinga lokushisa elifanayo lisiza ukunciphisa ukulahlekelwa izinwele kuze kufike ku-50% futhi lenza izinwele zibe namandla ngemva kokwenza isitayela.
Intengo yesithenjwa: 1,290,000 VND/comb
4.2 K SKIN KD380K umsebenzi wokuqondisa izinwele omningi kanye ne-curler
I-K SKIN KD380K iyinhlanganisela yezinwele zikagesi enemisebenzi eminingi yohlobo lwe-K-SKIN evela e-China. Lo mkhiqizo unepuleti yokushisa eyenziwe ngezinto ze-ceramic kanye nokulawulwa kwezinga lokushisa okuphakathi ukuze kuncishiswe ukulimala kwezinwele, ukugcina isitayela isikhathi eside. Ngesikhathi esifanayo, ishisa ngokushesha ngemizuzwana engu-30 futhi iqondise izinwele ngemizuzu emi-3 ngezinwele ezicwebezelayo, ezibushelelezi. Ukuklanywa kwamazinyo ekamu kunciphisa ukungqubuzana ukuze kuhlanganise izinwele, i-insulation ye-2-layer ivimbela ukushiswa kwezandla futhi iqinisekisa ukuphepha lapho isetshenziswa.
Ngakolunye uhlangothi, le K SKIN KD380K ikama kagesi ifakwe amazinga angu-5 wokulungisa kusuka ku-120 – 200 degrees Celsius, ifaneleka kuzo zonke izinhlobo zezinwele futhi ayilimazi izinwele. Ngesikhathi esifanayo, kuyasiza ukudala izitayela zezinwele ezihlukahlukene, ukugoqa futhi uqondise ngokuthanda kwakho futhi ulungise izinga lokushisa ngokuvumelana nezinwele ngayinye. Lelikama linakekela izinwele ngezinhlayiya ze-ion ezivikela kabili kanye nezinga lokushisa elizinzile lezinwele ezithambile, ezibushelelezi. Ngesikhathi esifanayo, ingemuva lekamu lenziwe ngendlela yokuxhumana nezinkinobho zokulawula kanye nokuboniswa kwemingcele lapho kulula ukuyisebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 1,490,000 VND/comb
>>>Bheka ku: [Review] Ingabe isomisi sezinwele se-Dyson silungile? Imininingwane yango-2021
4.3 Ikama likagesi elisezingeni eliphezulu leNova NHC-8810
I-Nova NHC-8810 ingenye yochungechunge ikamu lokugoqa likagesi I-multifunction edayiswa kakhulu yanamuhla ingeyohlobo lweNova. Lo mkhiqizo unomklamo wesimanje onombala opinki wesifazane kanye nesibambo esihlangene, esisebenziseka kalula. Leli kamu lingakha izitayela eziningi ezihlukene zokugoqa njengama-curls, ama-curls noma ama-puff. Ngesikhathi esifanayo, ama-curls enziwe angaba ngu-26mm ukuze enze ukubukeka okuhle nokungapheli.
Ngaphandle kwalokho, lekama kagesi ye-Nova NHC-8810 ifakwe isisekelo esijikelezayo esingu-360-degree sokuguquguquka, ukunyakaza okulula futhi okulula. Ikamu linokushisa okuphezulu okufika ku-200 degrees Celsius, lilungele zonke izinhlobo zezinwele futhi lidala izinwele ezisheshayo ngomzuzu ongu-1 nje wamasekhondi angama-30. Lo mugqa womkhiqizo unengxenye eyenziwe ngepulasitiki yekhwalithi ephezulu, ikamu lefiber ye-polyester kanye nomgogodla wensimbi ukusiza ukuqinisekisa ukuphepha okuphelele ngesikhathi sokusetshenziswa.
Intengo yesithenjwa: 120,000 VND/comb
4.4 Smart Panasonic EH-HE10VP421 Electric Comb
I-Panasonic EH-HE10VP421 iwumugqa wamakama ezinwele zikagesi ezihlakaniphile zohlobo oludumile lwePanasonic. Lo mkhiqizo unomklamo omuhle, ulingana kahle esandleni, futhi ikhanda lifakwe nge-rubber ukuze lidale ukuthintana okubushelelezi kwekhanda lekhanda, okulula ukulisebenzisa. Ngesikhathi esifanayo, ikamu linomklamo ohlangene osebenzisa amabhethri e-AAA anesikhathi sokusebenzisa esingafika kumaminithi angu-70, okwenza kube lula ukufaka ephaketheni nokusebenzisa noma yikuphi. Ikamu likagesi eligoqayo Lokhu kungahlakazwa kalula ukuze kuhlanzwe ngokushesha futhi kalula.
Ngaphezu kwalokho, ikamu likagesi lePanasonic EH-HE10VP421 lisetshenziswa ngobuchwepheshe be-ion obunegethivu ukunakekela nokuvikela izinwele ngempumelelo. Ama-ion akhiqiziwe asiza ekunciphiseni ukushaja okuhle ezinweleni futhi aqede ngempumelelo ugesi omile. Ngaleyo ndlela, izinwele ziba manzi futhi kunciphisa ukuhwaqabala nokuhwaqabala ukuze kube nezinwele ezithambile, ezibushelelezi. Lo mugqa womkhiqizo usiza ukudala ngokushesha amaphuzu ezinwele njengokuqondisa, ukugoqa, …
Intengo yesithenjwa: 920,000 VND/comb
>>>Funda: [Review] Iluphi uhlobo lwesomisi sezinwele lwe-Xiaomi olungcono kakhulu, okufanele luthengwe ngo-2021?
4.5 Ikhwalithi ye-Braun BR 730 yokukama izinwele zikagesi
I-Braun BR 730 ingenye yochungechunge Ikamu likagesi elingcono kakhulu nelidume kakhulu namuhla yeBraun brand eJalimane. Lo mkhiqizo wenziwa ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezinezici zesimanje ukuze unikeze ukuqina okuphezulu futhi akuphazamisi kabi izinwele. Le kama inobuchwepheshe be-ionic obuvelele ukusiza ukukhiqiza izinhlayiya ze-ionic ukusekela izinwele ezithambile nezicwebezelayo. Ngesikhathi esifanayo, kuyasiza futhi ukumunca umswakama ovela emoyeni ukuze wenze izinwele zibe namandla futhi zicwebezele ngokuphumelelayo.
Ngaphezu kwalokho, ibhulashi likagesi le-Braun BR 730 linama-synthetic bristles athambile asiza ukuhlanganisa izinwele ngaphandle kwama-tangles noma ukulimala. Ikhanda lebhulashi lisuseka kalula ukuze lihlanzwe ngokushesha futhi kalula. Ulayini womkhiqizo uphinde ufakwe isici sokuvala amandla esizenzakalelayo uma ungasetshenziswa ukuze wonge amandla amakhulu futhi uqinisekise ukuphepha okuphelele.
Intengo yesithenjwa: 1,800,000 VND/comb
Ngokwabelana okuningiliziwe esihlokweni esingenhla, sithemba ukukusiza uqonde kangcono Amacombs kagesi aphezulu angu-5 ahamba phambili nadume kakhulu namuhla. Siyabonga ngalokho, futhi inolwazi olwengeziwe lokuthola ikama elifanele ukwenza isitayela sisheshe futhi sibe lula.
>>>Funda kabanzi: Amawaksi ezinwele zamadoda aphezulu ayi-5 adumile namuhla